कहिलेकाहीं, प्रकृति को प्राचीन शोभा मा प्रवेश गर्न, पृथ्वीको अन्त्य गर्न जान आवश्यक छैन। आफ्नो पैतृक देशमा, त्यहाँ यो हाम्रो लागि आफ्नो शानदार सौन्दर्य राख्छ धेरै सुन्दर ठाउँ हुन्।
तिनीहरूलाई को - को Kungur गुफा संग आइस पहाड, आफ्नो भूमिगत पोखरी, रहस्यमय गुफाहरु, बरफ ब्लक को विचित्र पक्षबाट स्थिर को भुमरीमा लुकाउने। 2001 देखि, तिनीहरूले सँगै ऐतिहासिक पार्क गठन।
स्थान र वर्णन पहाड आइस
को पर्म क्षेत्रमा Kungur शहर देखि उत्तर-पूर्वी मा माउन्ट आइस छ। यसको उचाइ दुई नदी को पैंदा माथि सानो 90 मिटर भन्दा बढि, सानो छ - र Sylva Shakva नदी, को Dividing लाइन यसलाई ओगटेको जो बीच। गोर परिपत्र वा चोटीदार आकार को funnels को रूप मा एक पठार-जस्तो उचाइमा, बीहड Karst formations प्रतिनिधित्व गर्दछ। को ठाडो किनारा - केही टर्फ, अन्य ढाकिएको कोमल ढलान छन्। तिनीहरूलाई को सबै भन्दा ठूलो गहिराई मा 15 मिटर पुग्न र व्यास 50 मिटर भन्दा बढी छ। पानी भरिएको केही सोली र फारम Karst ताल।
कहिलेकाहीं, त्यहाँ 1 मी, ज्यादातर खोक्रो गर्न को सतह चौडाई मा pits छन्। एकदम धेरै Karst असफलता5मिटर, बाँकी एक व्यास अधिक छैन भन्दा जो, - 10 मिनेट विभिन्न आकार को समूह असफल troughs सँगै संयुक्त केही .. Karst formations unevenly वितरण हुन्छ: केही ठाउँमा 1 वर्ग प्रति घनत्व। मी। यो 3000 टुक्रा गर्न आउछ, र छिमेकी कुनै पनि हुन सक्छ। पर्वतमा को उत्तर-पश्चिमी ढलान को सरहद मा, पर्चा Baydarashki स्थित troughs को ठूलो क्लस्टर। Sinkholes इन्डेन्टेड र यसको शिखर। बरफ पहाड एक अद्वितीय जियोलोजिकल वस्तु हो। यो सबैभन्दा भ्रमण पर्यटक आकर्षण छ।
वनस्पति र माटो आवरण को विविधता दक्षिणी taiga subzone भाग Kungurskaya द्वीप जंगल रूपमा सहित, अति असमान भू-भाग कारण हो जहाँ बरफ पहाड। पहाड दायरा वनस्पति द्वारा कवर तीन प्रकारका: वानिकी, चुकंदर र ostepenennyh। त्यहाँ बिरुवाहरु, को पर्म क्षेत्रको वनस्पति लागि विशिष्ट छैनन्। दक्षिणी ढलान अवशेष घांसको मैदान र gornostepnymi बिरुवाहरु plastered माटो गर्न छाँटकाँट गरेका छन् ढाकिएको छ।
यसको सतह चाँदी मुद्दा pinnate पंख घाँस बाहिर फैलाउन र गर्मी ब्लूम नीलो बल Echinops को बीचमा। पर्वतमा बरफ त्यहाँ सुरक्षित प्रजाति: लाल Cephalanthera, thyme Taliev, सूर्यमुखी monetolisty, Astragalus र अन्य डेनिस। यस क्षेत्रमा आगो बनाएर, औषधीय जडीबुटी टिप्ने फूल संकलन गर्न निषेधित छ।
बरफ पहाड मनसायलाई यूराल को मोती यसको गहिराइमा मा लुकेका जोडिएको छ - अंग पाइप र यसको सतह मा एक सोली मार्फत breathes जो Kungur बरफ गुफा, र steppe बिरुवाहरु को शीर्ष गुफाको पारगम्य चट्टानको मार्फत सजिलै बढ्न। 260 मिलियन वर्ष गठन पहिले, तिनीहरूले जिप्सम बनेको र डोलोमाइट र चूना तहहरू संग anhydrite छन्। रक्स हाम्रो ग्रह को Permian जियोलोजिकल इतिहास हौं। गुफाको विशिष्टताको एक असामान्य रूप, सिर्जना विचित्र बरफ stalagmites र stalactites, धेरै पोखरी र शानदार गुफाहरु छ। स्थिर रक र बरफ लगभग6किमी को यो राज्य को लम्बाइ, यो संसारमा सातौं सबै भन्दा ठूलो, पक्कै, पहिलो सौन्दर्य छ, तर।
वैज्ञानिकहरू अनुसार, गुफा कम्तिमा 10,000 वर्ष। अधिक पछिल्लो मिलेनियम, धेरै पहिरो को एक परिणाम को रूप मा, गुफाहरु सबैभन्दा Vaults एक घरको छानो को आकार लियो। सफा हावा, ग्याल्याक्टिक मौन, महानता बरफ सजावट Kungur गुफा दुर्लभ प्राकृतिक जिज्ञासा बनाउँछ। यो केवल कम स्थित छ, 120 मिटर समुद्र स्तर माथि, त्यसैले कुनै ग्लेसियर वा permafrost छन्, र त्यहाँ भट्टीमा मस्यौदा, vnutripeschernogo जलवायु को सुविधाहरू निर्धारण जो प्रकार मा microcirculation हावा गुफाहरु सन्दर्भ छ।
प्रत्येक वर्ष बरफ मूर्तिहरु उपखाडी हावा तापमान को प्रभाव अन्तर्गत आकार परिवर्तन गर्न, गुफा निरन्तर परिवर्तन गरिएको छ। सबैभन्दा केन्द्रिय गुफाहरु पृथ्वी गर्मी शासनकालमै "अनन्त वसन्त" कारण (+6° C)। बरफ गुफा को राज्य को सतह तापमान असर: तल्लो भित्रका भण्डारण, अधिक चिसो भएको छ।
गुफाको विकास को इतिहास देखि
Kungur गुफा लामो समय को लागि मान्छे चिनिएको छ। कसले र यसलाई खोल्न जब - अज्ञात छ। त्यहाँ आइस पहाड साइबेरिया आफ्नो यात्रा अघि, 1578 मा जाडो पार्किंग Ermak एक ठाउँ थियो भनेर अनुमान छ। archeological स्मारक - जो शीर्ष Ermakovo बन्दोबस्त छ।
Kungur गुफा बारे पहिलो वैज्ञानिक जानकारी 1703 मा वीर्य Remezov संकलित। उनको योजना थियो। पछि यो अध्ययन र धेरै यात्री र भूगोल, वैज्ञानिकहरू द्वारा वर्णन, त्यसैले रूस गुफाको अन्वेषण छ। यसको पहिलो Custodian एक जीवनकालमा गुफा समर्पित गर्ने अलेक्जेन्डर Khlebnikov, उत्साही र रोमान्टिक, एक पैट्रियट थियो। सन् 1914 देखि, लगभग 40 वर्ष उहाँले गुफा, सुसज्जित, अध्ययन छ धेरै यात्राहरु नेतृत्व। हाल, यात्री लागि मुख्य मार्ग Electrified। Artfully रोशनी गुफा बस जादुई देखिन्छ।
अद्वितीय आइस गुफा Kungur पर्यटक धेरै आकर्षित गर्छ। पर्यटकहरू मात्र प्रकृति को यो सुन्दर काम पराउँछु सक्दैन, तर पनि धेरै कुरा सिक्न। हरेक दिन निर्देशित पर्यटन उपलब्ध छन्। अवधि - 1 घण्टा र पर्यटकहरु वर्ष तीन मौसम भ्रमण गर्न सक्षम हुने समयमा 20 मिनेट। यो जाडो, वसन्त, फेरि शरद ऋतु र जाडो। तिनीहरूले, 20 गुफाहरु भ्रमण हुनेछ गुफाहरु को खोज र अध्ययन गर्न सम्बन्धित धेरै तथ्य जान्न दन्त्यकथा र उत्सुक कथाहरू सुन्न।
लागि पर्यटकहरु को सुविधा होटल, पार्किङ र रेस्टुरा नजिकै जटिल स्थित छ "Stalagmite"।
पानी चिसो तापमान - ???
Columna Thuja: तस्बिर, वर्णन
जिप्सी किरा - सबैभन्दा खतरनाक किरा
Dysmorphophobia - यो ... लक्षण, निदान, उपचार
रूस Nostradamus। रूस भविष्यबारे Nostradamus 'भविष्यवाणीहरू
आफ्नो हातले पेस्ट Cytokinin: को संरचना र विनिर्माण
सुकेको फल संग स्वाद केक: एक नुस्खा
इस्लामी राज्य के हो? इस्लामी देशहरू: प्रकार, सुविधाहरू
प्रमाणीकरणकर्ता - यो के हो? म एक प्रमाणीकरणकर्ता mikrorazmetki किन चाहिन्छ?